Yuusuf Garaad: Mas’uul wax aan wanaagsaneyn ka sheega Soomaaliya jawaabtiisa waxaa ka muhiimsan in aan dalkeenna wax wanaagsan u qabanno – Kalfadhi
Yuusuf Garaad: Mas’uul wax aan wanaagsaneyn ka sheega Soomaaliya jawaabtiisa waxaa ka muhiimsan in aan dalkeenna wax wanaagsan u qabanno
Yuusuf Garaad Cumar Wasiirkii hore ee Arrimaha Dibadda Soomaaliya ayaa ku taliyay in laga fiirsado go’aanada ay gaarto Soomaaliya kuwaas oo waxyeeleyn kara dalka. Qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka oo u muuqda mid si dadban uu kaga hadlay hadalkii Madaxweynaha dalka Yugaandha Yoweri Museveni ayuu sheegay in aan lagu mashquulin jawaabta qof Soomaaliya ka sheegay wax aan wanaagsaneen.
“Mas’uul wax aan wanaagsaneyn ka sheega Soomaaliya in aan u jawaabno waxaa ka muhiimsan in aan dalkeenna wax wanaagsan u qabanno oo wax un aan ku biirinno horumarkiisa”, ayuu yiri Wasiirkii hore ee Arimaha Dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar. ” Haddii aynan taa karin, ugu yaraan waa in aan ka fiirsanno kana dhowrsanno wax kasta oo waxyeeli kara Soomaaliya”, ayuu hadalkiisa sii raaciyay Yuusuf Garaad.
Saacadihii la soo dhaafay waxaa jira warar sheegaya in cabsi laga qabo in dowladda Soomaaliya ay qaadato go’aan aan la ogeyn saameynta uu keeni karo, kaas oo loogu Jawaabayo Madaxweynaha Yugaandha oo shalay sheegay Soomaaliya ay tahay aan laheyn Dowlad iyo hey’ado dhisan.
Dad badan oo Diblomaasiyiin ah ayaa ku taliyay in Soomaaliya ay ka fiirsato go’aan waxyeelo u keeni kara Soomaaliya, Diblomaasiyiintaan ayaa ku taliyay in aan lagu deg degin go’aan kasta oo Arimaha Dibadda quseeya kaas oo si dadban iyo toos ahba u saameyn kara Soomaaliya.
Dalka Yugaandha ayaa ah dalka ugu badan ee Ciidamada ka jooga Soomaaliya, kana hoos shaqeeya Howlgalka Midowga Afrika ee AMISOM, waxaana ciidankooda ay ilaalo ka hayaan xarumaha muhiimka ah ee dowladda. Meelaha ay Ciidamada Yugaandha ilaaliyaan waxaa ka mid ah Madaxtooyada Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya 1-dii bishaan sheegtay in dalka ka eriday Wakiilkii Qaramada Midoobey u qaabilsanaa Soomaaliya Nicholas Haysom, isla markaana aan dalka laga rabin. Go’aankaas ayaa ahaa kii ugu adkaa oo ay Soomaaliya ka qaadato wax la xariira Arimaha Dibadda tan iyo burburkii kadib.